Oggolaanshaha Hore ee FAQ - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Jawaabo u hel su'aalaha ku saabsan siyaasadahayaga iyo nidaamyada oggolaanshaha hore.
Dhagsii su'aalaha hoose si aad waxbadan uga ogaato siyaasadaha iyo habraacyada oggolaanshaha hore. Raadi sida loo gudbiyo sheegashooyinka iyo sababta qorshayaasha caafimaadku ugu baahan yihiin oggolaansho.
Waa maxay oggolaansho hore? (PA)
Oggolaanshaha hore waa oggolaanshaha horumarsan ee nidaamyada gaarka ah, adeegyada, qalabka caafimaadka, sahayda, iyo daawooyinka ee qorshaha caafimaadka bukaanka. Dib-u-eegista oggolaanshaha hore waa habka lagu go'aaminayo baahida caafimaad ee adeegyada la sheegay iyadoo la raacayo tilmaamaha daryeelka caafimaad iyo shuruudaha maaraynta isticmaalka. Oggolaanshaha Hore ayaa looga baahan yahay dhammaan gelitaanka bukaan-socodka ee qorshaysan (qorshaysan), iyo adeegyada cayiman ee cayiman, dawooyinka caafimaadka, qalliinka, ogaanshaha, daaweynta iyo qaababka sawirka.
Maxay qorshayaasha caafimaadku ugu baahan yihiin oggolaansho hore?
Nidaamka oggolaanshaha hore wuxuu siinayaa qorshaha caafimaadka fursad ay dib ugu eegaan sida lagama maarmaanka u ah adeegyada qaarkood ama daawooyinka ay ugu jiri karaan daaweynta xaaladdaada caafimaad. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah daawooyinka magaca magacyadu aad ayey qaali u yihiin. Inta lagu jiro dib-u-eegista, qorshaha caafimaadka ayaa laga yaabaa inuu go'aansado nooc guud ama mid kale oo qiimo jaban oo si isku mid ah si fiican ugu shaqeyn kara daaweynta xaaladdaada caafimaad.
Waxaad sidoo kale fakis ku diri kartaa codsiyada oggolaanshaha kahor illaa 206-652-7065. Fadlan hubi lambarka fakiska ee ku yaal xagga sare foom kasta maxaa yeelay way ku kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran codsiga. Halkan ka hel foomamka oggolaanshaha hore.
Farmashiyaha, bixiyeyaashu waa inay ku soo gudbiyaan codsiyada iyagoo adeegsanaya ExpressScripts oo loogu talagalay oggolaansho hore, tillaabo tallaabo, qaab-aan-caadi ahayn, ama xad-dhaaf xadidan. Ugu wac iyaga 1-800-605-8168 inaad la hadasho takhasusle PA ah.
Dhammaan codsiyada kale ee PA waxaa qaban doona shaqaalaha CHPW. Fadlan la xiriir wakiilkaaga xiriirka bixiyaha wixii macluumaad dheeraad ah.
Looma baahna gudbin ama oggolaansho loogu talagalay daaweynta qolka gurmadka.
Haddii CHPW ay diiddo codsigaaga inaad maamusho adeegyada qaarkood, daaweynta, qalabka, ama daawooyinka laguu qoro, xubinta ayaa rafcaan ka qaadan kara go'aanka waana inay raacdaa hab maamuuska boggaga rafcaanka iyo cabashooyinka.
Haddii daroogada loo diido Qoraallada Degdegga ah, adeeg bixiyeyaashu waxay rafcaan ka qaadan karaan go'aanka iyagoo u diraya warqad iyo daaweyn caafimaad
dukumiinti, oo ay ku jiraan taariikhda iyo sababta diidmada ee ay bixisay ESI, in:
Attn: Racfaanada Faa'iidada Medicare ee CHPW
Rafcaanka degdega ah waxaa loogu talagalay xaaladaha degdega ah oo keliya; wac 1 (800) 942-0247 (Wicitaan Bilaash ah)
Codsiyada oggolaanshaha hore ee caadiga ah waxaa lagu shaqeynayaa 14 maalmood gudahood.
Codsiyada deg-degga ah ee degdegga ah waxaa looga baaraandegaa 72 saacadood gudahood.
Waraaqo noocee ah ayaan ubaahanahay inaan kusoo gudbiyo codsigayga PA?
Dukumiinti lagu taageerayo baahida caafimaad waa in lagu soo gudbiyaa codsiyo Oggolaansho Hore. Macluumaadkani wuxuu taageeraa baahida daaweynta iyo soo gudbinta macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan soo gudbinta bilowga ah waxay gacan ka geysaneysaa in la hubiyo in codsiga lagu socodsiin karo waqtigiisa.
Taariikhda hadda jirta iyo / ama baaritaanka takhtarka ee wax ka qabanaya dhibaatada iyo baahida
adeegyada la codsaday
Shaqaalaha Maaraynta Ka-faa'iideysiga CHPW waxay codsan karaan macluumaad daaweyn gaar ah oo dheeri ah oo fakis ah ama
telefoon ahaan si loo dhammaystiro hawsha oggolaanshaha.
Miyaad helin jawaabta aad raadineysay?
Adeegga macaamiisha ayaa kaa caawin kara inuu kuu jiheeyo jihada saxda ah. Ugu wac iyaga 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1)
La wadaag khibradaada!
Ra'yi-celintaadu waxay naga caawin doontaa inaan horumarino barnaamijkeena maaraynta adeegsiga. Fadlan qaado daqiiqado yar si aad u dhammaystirto sahan kooban oo ku saabsan habsocodyada oggolaanshaha hore.
HADDA NAGA SHEEG
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 5, 2019